Zvigadzirwa zverunako - Bezzia | Bezzia
Chikamu chakatsaurirwa runako michina yemarudzi ese anokwanisa kushandiswa nevakadzi kutaridzika seane runako: kune kumeso, muviri, runako rwevhudzi kana kunyangwe makomputa ekushandisa kuve echimanje-manje. Zvinhu izvi zvakakosha nekuti zvichatibatsira kuzadzisa mhedzisiro yatinoda, zvishandiso zvekutarisa uye kunzwa zviri nani.
Dyes: Mumakore ose aya madhayi anga achivandudza muhunhu uye akasiyana siyana, kutsvaga nhasi muzvitoro zvine hunyanzvi sevashandisi vevhudzi, nzvimbo dzerunako kana kutengeswa kwezvigadzirwa zvekushongedza huwandu hwakawanda hwemadhayi emhando dzese dzebvudzi, madhayi anogara aripo, mamwe anoenda pamwe nekuwacha, mune yakasviba micheka, furo kana mousse, kuitira kuti paunenge uchitora bhati rekushambidza nedhayi raunofarira zvakanyanya, unogona kutarisira vhudzi rako, uchipa chikafu uye kupenya. Pano iwe uchaona akanakisa madhayi eiyo nguva zvichienderana neyakanyanya fashoni mafemu.
Masks: Nyika yezvizoro izere nezvinhu zvinoyemurika zvakatsaurirwa nyika yerunako kuti mukadzi wanhasi agone kunakidzwa nekunakidzwa kwakanyanya kwehupenyu, saka nerubatsiro rwemasikisi iwe unenge uine ganda rakakura chero rudzi rweichi, nekuti kunyangwe vari chakagadzirwa kana zvakasikwa masiki, iwe uchawana chaiyo. Pano iwe unogona kudzidza zvakawanda nezve masiki, pamwe nemaitiro ekuzvigadzira nezvinhu zvakasikwa senge cucumber, sipinashi, avocado kana coconut, kana zvakare mashandisiro azvo uye nenguva yakakwana yezuva. Iwe unowana zvese zvaunoda kuti uve noutano hwakanaka, hwakatsetseka uye husina tsvina-isina ganda nemasiki.
Makirimu: Kana munhu achifunga nezvemafuta, iro izwi rinova chinhu chakanyanya, nekuti kune makirimu ezvido zvakawanda. Munyika yezvigadzirwa, akasiyana makirimu akakura, tinogona kuwana mafuta ekuzora, nguva uye mushure mekuzora, nguva dzose nechinangwa chekutarisira nekuvandudza ganda redu. Hatigone kukanganwa kuti isu tinongova neganda rimwe chete uye kuti kana rakakuvadzwa harife rakafanana zvakare. Pano iwe unowana matipi ekusarudza yakanakisa kirimu yeganda rako uye akanakisa mabhureki ayo anofanirwa kutariswa, mukuwedzera kune zvimwe zvakawanda zvimwe ruzivo kuti unakirwe nezvigadzirwa izvi zviri pamusika uye zvakare nesarudzo dzakagadzirwa kwazvo dziripo, dzimwe nguva zvimwe inobatsira pane vekutengesa, saka imwe nguva yekuzvigadzirira yekugadzira zvakare ine nzvimbo munzvimbo ino.
Zvizoro: Mafuta ekuzora ishoko rakajairika, mariri tichawana zvese zvatinoda kuti titarisire ganda redu, pamberi, panguva uye mushure mekuzora. Saka pasina kupokana pano iwe unogona kuwana zvese zvaunoda, kubva kumatipi, kumakemikari, kuburikidza nemanomano ayo dzimwe nguva taisazombofunga kufunga nezvazvo. Hatigone kukanganwa kuti kuchengetedza ganda redu nezvimwe zvinonhuwira kwakakosha zvakanyanya kuti tirege kuriranga nekuzora nezvimwe zvekushandisa zvatinoshandisa. Izvo zvakakosha kuti uzive kuti rimwe nerimwe ganda rinoda rudzi rwekushongedza uyezve mhando yekuzora, saka isu tinofanirwa kuziva kuti isu tinofanirwa kuremekedza muviri wedu.
Kurapwa kwebvudzi: Munzvimbo ino unogona kudzidza zvakawanda pamusoro pemhando dzese dzekurapwa kwebvudzi, kunyangwe iwe uchida zvigadzirwa kuti ubvise mafuta akawandisa, kurapwa kwebvudzi kudzoreredza magumo kana zvese zvakanakisa kudzivirira kurasikirwa nevhudzi, ndosaka tichikupa kubva kune ino blog mhando dzese yemishonga yekurapa inogona kuwanikwa ese mune vanogadzira vhudzi uye munzvimbo dzerunako kana nzvimbo huru kuitira kuti ugare uine vhudzi rako rakachengetwa zvakanaka. Mamwe marapirwo ebvudzi anozoita kuti irambe yakasimba, yakasimba, iine huwandu hwakawanda uye pasina njodzi yekudonha.
Chatinoda kukuudza zvigadzirwa zvakafanira kune akasiyana runako mazano atinofunga: yakanakisa penzura yeziso yekutaridzika kuputa, yakanakisa miromo inowirirana nemavara egore kana kirimu yakanakisa yeganda rine mafuta.
Isu tinodawo kukuratidza izvi zvigadzirwa, kuyedza kuvhara ese marudzi emitengo uye mabrandi, pasina chimwe chinangwa kunze kwekuita kuti iwe uwane yakanakisa sarudzo.
Kokonati mafuta echiso, maitiro ekuishandisa nemazvo
kubudikidza Tony Torres inoita 6 mwedzi .
Kokonati mafuta ndeimwe yeaya akawanda-chinangwa zvigadzirwa nekuda kwemabhenefiti ayo mazhinji. Kuve yakasikwa antioxidant, ...
Tricks yekusarudza zvipfeko zvinoenderana nerudzi rweganda rako
kubudikidza Tony Torres inoita 8 mwedzi .
Kusarudza zvipfeko zvinoenderana nerudzi rweganda rako zvakakosha kuti vakwanise kupa mhedzisiro mune yega ...
kubudikidza Susana Garcia inoita 12 mwedzi .
Kuva nemiromo ine hydrated kwakakosha kana tichida kushandisa yedu yakanaka miromo pazviri. Asi pane izvi isu tinofanirwa ...
Kiko Milano ndechimwe chezvinhu zvedu zvatinofarira uye inogara ichitiratidza maunganidzwa matsva akakwana kunakidzwa ...
Zhizha rave pedyo nekona uye isu tave kutotarisira mberi kunakidzwa naro. Saka…
Properties ye hyaluronic acid uye mashandisiro ayo
Hyaluronic acid chinhu chatakanzwa nezvacho kakawanda, kunyanya muzvizoro, kubvira ...
Chii chinonzi ferulic acid uye ayo maficha
kubudikidza Susana Garcia inoita 1 gore .
Zvimwe zvinowedzera uye zvinhu zvinoshandiswa muzvizoro, uye kufambira mberi kwakaitwa ...
Mushure me rosehip mafuta kana argan oiri, isu takafunga kuti pakanga pasisina mafuta e ...
Mafuta mashanu echisikigo aunofanirwa kunge uine muhombodo yako yerunako
Nhasi tinozvitarisira isu nezvizoro zvakawanda asi pane imwe tsika yekutsvaga zvakanyanya uye izvo izvo ...
Shandisa macadamia mafuta munzira dzako dzerunako
Macadamia muchero unokura pamuti une mavambo awo kuAustralia. Uyu muti mukuru ...
Kunyangwe chiri chokwadi kuti Zara anga atove netambo diki yezvizoro zvataigona kuwana pamusoro pezvose ...
L'Oréal Professionnel X-Tense Kusimudza, maitiro ekushandisa
Moroccan kutwasuka kwebvudzi risingadzoreke
Masikisi ekugadzira bvudzi husiku
Rima dota blonde, kumashure mune fashoni
Maitiro ekubvisa dhayi pasina kuchenesa bvudzi
10 kurudziro yekushandisa iyo simbi yakatwasuka pasina kukuvadza bvudzi rako
Dhayi dzvuku dzine burgundy pasi penzvimbo dzevhudzi rakapusa
Akanaka mwenje mutsvuku bvudzi dhayi mavara
Mhando dzakasiyana dze blonde
Mashandisiro ekushandisa hydroquinone makirimu ekumaka ganda
Zuva rega rega kumeso kweganda rine mafuta